Maninona i Madagasikara No Tafalatsaka Indray Anatin’ny Haizina? · Global Voices teny Malagasy
Ilay orinasa mpiandraikitra ny jiro sy rano any Madagasikara, ny Jirama – sehatra ho an'ny daholobe
Tafalatsaka anatin'ny haizina indray i Madagasikara saingy amin'ity indray mitoraka ity, dia tsy ny pôlitika irery ihany no tompon'andraikitra amin'io haizina io.
Hatr'ireo taona vitsivitsy izay, iharan'ny fahatapahan'ny herinaratra lava sy tsy an-kiato ny firenena. Io tranga io, izay fantatra amin'ny anarana hoe delestazy, dia tsy vaovao velively saingy nivelatra ary tsy voatàna intsony izany tanatin'ireo taona vitsy lasa ka mandrotika ny toekarem-pirenena avy any ifotony sy mampirongatra ireo olom-pirenena. Lany fanazavàna momba ireo tsy fanajàna ny fanomezan-tokiny ny Jirama, ilay orinasam-panjakana misahana ny fizaràna herinaratra manerana ny firenena. Vao haingana izay dia namboraka ny minisitry ny angovo (teo aloha) fa tanàna 80 ao amin'ny firenena, eny 80, no tsy manana herinaratra. Tsy naharitra ela ihany koa io minisitra io noho ireo tsifahombiazana niverimberina ireo. Manazava ny anton'ilay fanaisorana ny minisitry ny angovo, Richard Fienena, ny “Mada Tribune”:
Manohy ny fandravàny ny delestazy. Ny niharam-boina farany : ny minisitry ny angovo Richard Fienena izay noesorina tamin'ny toerany nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 22 oktobra 2014. Ny minisitry ny toekarena amin'izao fotoana, ny jeneraly Herilanto Raveloarison, no miandraikitra vonjimaika ny toeran'ny minisitry ny angovo mandra-pisian'ny baiko vaovao.
Richard Fienena – minisitry ny angovo malagasy teo aloha – sehatra ho an'ny daholobe
Azo lazaina ho tsy nanan-tsafidy ny governemanta. Mitaky fanazavàna momba ireo tsifahombiazana miverimberina ireo ny vahoaka malagasy ary io minisitra io no hita hatao mpisolovaika ny ankalana nibaribary indrindra. Saingy amin'io sehatry ny fahanteran'ny tambajotra io, marobe ireo tsy fahatomombanana, eo anivon'ny mpanapa-kevitra ao amin'ny Jirama, ny governemanta ary ireo hafa mpaninjara herinaratra. Ny zavatra azo antoka dia ny hoe tofoka tanteraka ireo mponina manodidina:
«Manelingelina ny asanay ireo fahatapahan'ny herinaratra, raha toa ka midangana be noho ny antony tsy fantatray ny lazam-bidy », hoy i Julienne, renim-pianakaviana iray mipetraka any Soamanandrariny, tanatinà onjam-peo iray tsy miankina. Minitra vitsy taorian'izany, nirotsaka an-tsehatra ireo mpanjifa hafa avy any amin'ireo tanàna tahaka an'Ambohipo sy Analamahitsy mba hitondra fitarainana amin'ny Jirama.
Tsy tara ihany koa ireo mpampiasa aterineto amin'ny fanehoana ny hatezerany. Pejy Facebook maro manakiana ny tsy fanajàn'ny Jirama ireo fanomezan-tokiny no niforona. Ao amin'ny pejy “Jirama Delestage”, azo vakiana fa mirongatra ihany koa ny fanoherana any amin'ny tanànan'i Port Berger:
Sarin'ilay pejy Jirama Delestage ao amin'ny Facebook – nahazoana alàlana
Ao amin'ny pejy Jirama Trop Nul (izay ahitàna mpitia maherin'ny 4500 ao amin'ny Facebook), manoritsoritra zava-mitranga iray tsy mampino ny mpampiasa aterineto iray hafa:
Fantatrareo ve ry mpanaraka isany (tsy afa-manoatra) fa iharanà fahatapahan'ny herinaratra 20 ora tsy an-kiato ireo tanàna kely sasany sy vohitra km vitsy miala an'i Tanà hatramin'ny nanombohan'ny vanim-potoanan'ny orana!!! Ary izao, tsy misy tompon'andraikitra na sampan-draharaha hitarainana. Saingy satria olona kely izy ireny, dia tsy misy miraharaha.
Koa inona àry ireo anton'ireny hadisoana ireny? Tahaka ny fahita matetika, olana ara-toekarena no antony lehibe indrindra. Mampatsiahy matetika ny Jirama fa mba hahafahany mamaly ny filàn'ny nosy iray manontolo, dia mila solika (gazoala) be dia be izy. Kanefa, lafo loatra ny vidin'ny barikan-tsolika any Madagasikara ka tsy afaka mamahana ireo vondrom-pihariny iray manontolo ny Jirama. Manazava amin'ny antsipiriany io olana io sy ireo safidy ho an'ilay orinasa ny Madatsara:
Eny tokoa, mihalafo hatrany ny solika na dia afaka miady varotra aza ny Jirama, amin'ny maha-mpanjifa goavana azy. 17 cents anà Euro isaky ny kWh ny vidin'ny herinaratra mivoaka aminà toby iray ahodin-tsolika, raha 13 hatramin'ny 15 cents kosa ny solika mavesatra ary 5 cents ny herinaratra avy amin'ny rano.
Tsy ny vidin'ny solika ihany anefa no loharanon'ireo fanamby sedrain'ny Jirama. Ny trosa tsy voaloany nandritra ny folo taona mahery teo amin'ireo mpampindram-bola marobe no tena fototry ny olana. Mahatonga ny Jirama harefo dia harefo manoloana ireo mpamatsy vola maro izany trosa izany, ny lehibe indrindra amin'izany dia ilay lehilahy mpanao afera Hassanein Hiridjee, mpanana petra-bola lehibe anatinà orinasa roa goavana any Madagasikara, dia ny Telma (fifandraisan-davitra) sy ny Jovenna (solika). Mampiahiahy ireo mpampiasa aterineto maro ny fieritreretana ny mety hananan'i Hiridjee fahefana be eo amin'ny hoavin'ny Jirama satria dia tompon'ny orinasa “Electricité de Madagascar” ihany koa i Hiridjee. Manazava “La Nation”:
Efa mikosokoso-tànana sahady i Hassanein Hiridjee, tompon'ny orinasa “Electricité de Madagascar”. Làlana misokatra tsara ho azy ny fahasahiranan'ny Jirama amin'ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa, mba hakàny ny orinasam-panjakana misahana ny jiro sy rano. Tsilalaon-teny avokoa ny zavatra rehetra. Nilaza ny minisitra Fienena Richard, izay mpiara-miasa akaiky amin'i Hassanein Hiridjee, fa tsy hatao orinasa tsy miankina ny Jirama, kanefa misy ireo sendikalista no tsy mino izany.
Eny tokoa, tsy tahaka ny eritreritry ny vahoaka any Madagasikara no miseho satria tsy ny Jirama irery ihany ankehitriny no mpamokatra herinaratra any Madagasikara tahaka ny voalazan'ilay orinasa ao amin'ny vohikalany:
Orinasa tsy itononana anarana miantoka ny zo iombonana (société anonyme de droit commun) ny Jirama, izay eo am-pelatànan'ny Fanjakana Malagasy tanteraka. Tarihanà Filankevi-pitantanana izay iandraiketan'ny Tale Jeneraly. Tendren'ny Minisitera misahana ny Angovo izy. Hatramin'ny taona 1999 sy ny fanalalahana ny sehatry ny herinaratra, dia tsy irery intsony ny jirama eo amin'ny famokarana herinaratra. Saingy mbola mibahana ny fitaterana sy ny fizaràna ihany aloha izy.
Iray amin'ireo orinasa mpamokatra herinaratra ny Henri Fraise, orinasa frantsay misahana asam-bahoaka napetraka tao Madagasikara efa 60 taona izay. Mampiasa vondrom-pihary herinaratra io orinasa Fraise io amin'ireo fotodrafitrasany ao amin'ny nosy. Rehefa tonga saina ny Jirama fa tsy afaka hanome fahafaham-po an'ireo mpanjifa eraky ny faritany, dia nisy fifanekena natao niaraka tamin'ny orinasa Fraise ho an'ny fametrahana ireo vondrom-pihary herinaratra ao amin-dry zareo. Toa tsikaritra anefa fa tsy mitombina intsony io fifanekena io eo amin'ny lafiny ara-bola:
Mitovy avokoa anefa ireo olana lazaina ho avy amin'ny kojakoja fanolo ireo, isam-paritra, hany ka mampitombo ny ahiahy. Ny zava-misy dia tsy mavitrika amin'io raharaha io ny orinasa Fraise. Hany ka noesorina ireo vondrom-pihary herinaratra sasany, noho ny tsy fahatomombanana ara-teknika, hono.
Mazava fa tsy moramora ho an'ny minisitry ny angovo vaovao ny fikarohana vahaolana momba ireo olan'ny Jirama sy ny delestazy any Madagasikara amin'ny ankapobeny. Mandritra izany fotoana izany, tsy maintsy miaritra mora ny manjo azy eny ny vahoaka malagasy ka manantena fa ho vavaka ara-pinoana fotsiny ihany sisa ilay hazavàna ery amin'ny faran'ny tonelina
Soratra miverina: Madagasikara anatin’ny haizina. Jirama. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
[…] Maninona i Madagasikara No Tafalatsaka Indray Anatin’ny Haizina? […]
02 Desambra 2014, 23:14